Finasteride साइड इफेक्ट र अन्तर्क्रिया, र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समुदाय, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, समाचार समाचार चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी समुदाय स्वास्थ्य कल्याण कम्पनी, चेकआउट औषधि बनाम मित्र कम्पनी, समाचार
मुख्य >> औषधि जानकारी >> Finasteride साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने सिक्नुहोस्
Finasteride साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने सिक्नुहोस्
फिन्स्टराइड एक स्टेरोइड जस्तो औषधि हो जुन प्रायः सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (बढाइएको प्रोस्टेट) र पुरुष ढाँचा टाउकोको उपचार गर्न सिफारिस गरिन्छ। तपाइँ सम्भवतः यसलाई औषधि क्याबिनेट र फार्मेसीहरूमा ब्रान्ड नामहरूको रूपमा फेला पार्नुहुनेछ प्रोस्कार वा प्रोपेसिया , यद्यपि एक सामान्य संस्करण पनि उपलब्ध छ।
औषधीले टेस्टोस्टेरोनलाई डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) मा रूपान्तरण गर्नबाट रोक्दछ, जसले प्रोस्टेट ग्रंथि वृद्धि र कपालको स्राव संकुचन गर्दछ। यो प्राय बिरामीहरूको लागि प्रोस्टेट आकार घटाउनमा सफल छ र दुई-तिहाइ पुरुषहरूले कपाल झर्ने रिपोर्टको लागि यसलाई लिन्छन हार्वर्डका अनुसार। जबकि केहि फाइनस्टरइड अध्ययन साथै महिला कपालको बहालीको पनि सुझाव दिईएको छ, यो सामान्यतया महिला वा बच्चाहरूलाई सिफारिस गरिएको छैन, विशेष गरी गर्भवती महिलालाई, किनकि यसले जन्म दोषहरू निम्त्याउन सक्छ।
एकै साथ पुरुष ढाँचा कपाल झर्ने उपचार र बीपीएच, पुरुषहरूका लागि दुई व्यापक चिन्ता, फिनस्टरलाई पुरुष स्वास्थ्य सुपरड्रग जस्तो देखिन्छ। त्यसो भए? जबकि यो अविश्वसनीय उपयोगी छ, Finasteride उत्तम छैन। सतह-स्तर फाइदाहरू भन्दा टाढा हेर्नुहोस्, र तपाईंले विभिन्न फिनालेस्टर साइड इफेक्ट, चेतावनी, र औषधि अन्तर्क्रिया पाउनुहुनेछ। तीनैमा गहिराइ हेर्नको लागि पढ्नुहोस्।
सम्बन्धित: प्रोस्कार भनेको के हो? | प्रोपेसिया भनेको के हो? | Finasteride के हो?
Finasteride मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Finasteride मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
Finasteride को साइड इफेक्टहरू
प्रोपेसिया र प्रोस्कार सामान्यतया राम्रोसँग सहन गरिन्छ, तर तिनीहरू सम्भावित साइड इफेक्टको पूर्ण श्रृंखलाको साथ आउँदछन्। फिनस्टराइड एक ड्रग वर्गसँग सम्बन्धित छ जसलाई--अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटरहरू भनिन्छ, जसले हार्मोनको स्तरलाई असर गर्दछ र पुरुष हार्मोन गतिविधि घटाउँछ, कहिले काहिं प्रजनन साइड इफेक्टहरू निम्त्याउँदछ:
नपुंसकता / इरेक्टाइल डिसफंक्शन (औषधी बिच्छेदको साथ उल्टो)
स्खलनको मात्रा कम भयो
माथिका सूचीबद्ध साइड इफेक्टहरूको अतिरिक्त, अन्य साधारण साइड इफेक्टहरू रिपोर्ट गरिएको लगभग १% -१०% बिरामीहरूले औषधी लिनेहरू समावेश गर्दछन्:
ओर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन (खडा हुँदा कम रक्तचाप)
अन्त्यमा, कम-सामान्य प्रतिकूल प्रभावहरू, सामान्यतया 1% -2% भन्दा कम फिनेस्टरइड लिने बिरामीहरूमा देखिएको, समावेश:
Finasteride लिने बिरामीहरूले पनि बढ्दो पेशाब अनुभव गर्न सक्छ। यद्यपि बीपीएचको उपचारमा (जुन प्राय: पेशाब प्रतिबन्ध गर्दछ) यसले स्वस्थ मूत्र प्रवाहमा फिर्ताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ।
भिटामिन डी3र भिटामिन डी बीच के फरक छ?
एकलकेयर छुट कार्ड प्रयोग गर्नुहोस्
Finasteride को गम्भीर साइड इफेक्ट
सामान्य फिनस्टेरिइड साइड इफेक्टहरू असुविधा हुन पर्याप्त छन्, तर ती औषधीहरूको लागि सामान्य भन्दा बाहिरका छैनन्। विरलै अवस्थाहरूमा, तथापि, अधिक गम्भीर साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ जसलाई चिकित्सा उपचार आवश्यक पर्दछ। यसमा समावेश छन्:
लगातार ईरेक्टाइल डिसफंक्शन : मा भर्खरको अध्ययन , १.4% पुरुषहरू जसले--अल्फा रिडक्टेस अवरोधक उपचार शुरू गरे यौन दुर्बलता विकसित भयो जुन औषधी बन्द गरेपछि कम्तिमा days ० दिनसम्म रहिरहन्छ। यो स्थायी नपुंसकता होईन जस्तो कि केही मिडिया स्रोतहरूले रिपोर्ट गरेका छन्, तर यसले उपचारको बखत र पछिको दिनको यौन जीवनलाई असर गर्न सक्छ।
बांझपन: स्पष्ट हुनका लागि, यो जीवन भर बांझपन होईन। केही पुरुषहरूले फिनेस्टराइड लिने बखत वीर्य गुणस्तरीय अनुभव गर्न सक्दछन्, जुन औषधी रोकेपछि सामान्यतया सुधार हुन्छ।
डिप्रेसन: Finasteride हिप्पोक्याम्पसमा परिवर्तन हुन सक्छ , जसले भावनात्मक प्रतिक्रियाहरू प्रशोधन गर्दछ, यसले अवसादग्रस्त अवस्था र आत्मघाती विचारहरूमा अग्रसर गर्दछ। सम्भावित अवरोध गरिएको यौन समारोहबाट पनि तनाव र चिन्ता उत्पन्न हुन सक्छ।
स्तन क्यान्सरको बढेको जोखिम: निश्चित अध्ययन Finasteride थेरापी र पुरुष स्तन क्यान्सर बीच एक सम्बन्ध प्रश्न छ, जबकि अरूलाई कुनै सम्बन्ध छैन। अझै पनि, जो कोही ड्रग लिन्छन् क्यान्सर सूचकहरू जस्तै स्तन विस्तार, सूजन, दुखाइ, डल्ला वा निप्पल डिस्चार्जका बारे सचेत हुनुपर्दछ, र यदि यी साइड इफेक्टहरू जारी रहन्छ भने डाक्टरलाई भेट्नुहोस्।
उच्च-श्रेणीको प्रोस्टेट क्यान्सरको उच्च जोखिम : एक अनुसार न्यू इ England्गल जर्नल अफ मेडिसिनबाट अध्ययन , Finasteride ले कम ग्रेड प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिम कम गर्दछ, तर उच्च ग्रेड प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिम बढाउन सक्छ। लामो अवधिका परिणामहरूले प्लास्टरबो विरूद्ध फिनास्टराइड प्राप्त गर्ने बिरामीहरूको तुलना गर्ने अस्तित्वको नतिजामा कुनै फरक देखा पर्दैन, र यस खोजीमा योगदानकर्ताहरूले अनुमान गरे कि फिनास्टरइडले वास्तवमा यस प्रकारको क्यान्सर पत्ता लगाउन सक्ने क्षमतामा सुधार ल्याउँछ।
एलर्जी प्रतिक्रिया: विरलै अवस्थाहरूमा, फिनस्टेरिडले गम्भीर एलर्जीको प्रतिक्रिया निम्त्याउन सक्छ। पित्तीहरू, सास फेर्न गाह्रो, र जिब्रो वा घाँटी सूजन जस्ता संकेतहरूले तत्काल मेडिकल ध्यान पुर्‍याउँछन्।
दृष्टि समस्याहरू कुनै विशिष्ट फिनस्टेराइड साइड इफेक्ट हुँदैन, यद्यपि एउटा अध्ययन एक सम्बन्ध भेटियो। जे होस्, यो एकदम सानो नमूना आकार थियो, त्यसैले निश्चित गर्नको लागि थप परीक्षण आवश्यक पर्न सक्दछ। तर यसको मतलब यो होइन कि यो तपाईंको दर्शनको लागि पूर्ण हानिकारक हो। डा। युना रापापोर्ट, एमडी, MPH का अनुसार म्यानहट्टन आँखा , Finasteride आफैले रेटिना र optic तंत्रिका लाई subclinical क्षति निम्त्याउन सक्छ, जसले तपाईंको वास्तविक दर्शनलाई असर गर्दैन, तर एक विशेष छविमा फेला पार्न सकिन्छ। थप रूपमा, तुलनात्मक प्रोस्टेट औषधिहरू जस्तै फ्लोम्याक्सले आईरिसलाई सीमित पार्ने तरीकालाई असर गर्दछ र निश्चित शल्यक्रिया गर्दछ, विशेष गरी मोतियाबिन्द शल्यक्रिया, अधिक चुनौतीपूर्ण।
डिमेन्शिया एक चिन्ताको विषय हुनसक्दछ, मुख्यतया किनभने डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोनले संज्ञानात्मक कार्यलाई असर गर्दछ। को न्यूरोलॉजिकल साइन्सको जर्नल two-अल्फा रिडक्टस इनहिबिटर थेरापीको पहिलो दुई वर्षमा डिमेन्शियाको उच्च जोखिमहरू फेला पर्‍यो, तर त्यसपश्चात कुनै जोखिम बढेको छैन।
यी केही साइड इफेक्टहरू अनुभव गरेपछि (वा पढेर), केहि पुरुषहरूले उनीहरूको फिनेस्टरइड उपचार काट्न चाहान्छन्। त्यहाँ ठोस टर्की छोडे पछि कुनै गम्भीर परिणाम वा निकासीहरू हुँदैन, तर कपाल झर्नु र प्रोस्टेट वृद्धि सम्भव छ कि अर्को उपचारको ठाउँ लिईएन भने पुन: सुरू हुनेछ।
सामान्यतया, फिनेस्टरइड एक सुरक्षित उपचार विकल्प हो। त्यो भन्यो, सायद यो सबै साइड इफेक्टबाट सबैभन्दा ठूलो टेकवे यो सबैको लागि होईन। यस अनुसार प्रोपेसिया औषधि जानकारी यसको निर्माता, मर्क, र एफडीए बाट, Finasteride महिला वा बाल रोगी बिरामीहरूमा प्रयोगको लागि संकेत गरीएको छैन। र यो विशेष गरी गर्भवती महिलाहरूको लागि साँचो हो। अजन्मे पुरुष बच्चाहरूमा औषधीको प्रभाव यति हानिकारक हुन सक्छ कि एफडीएले टु or्गिएको वा कुचलिएको प्रोफेसिया ट्याब्लेटहरू पनि सम्हाल्नको लागि अपेक्षा गर्ने आमाहरूलाई चेतावनी दिन्छ।
पूर्व-अवस्थित कलेजो रोग वा कलेजोको कार्य विकृति भएको जो कोहीले फिन्टरसाइड प्रयोग गर्ने बखत सावधानी अपनाउनु पर्छ किनकि यो यकृतमा मुख्यतया मेटाबोलिज्ड हो। कुनै विशेष खुराक समायोजन सल्लाह दिइदैन।
त्यहाँ दुई मानक फाइनस्टरराइड डोजहरू छन्: १ मिलीग्राम र mg मिलीग्राम। जब पुरुष ढाँचाको टक्कैपन वा एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेशियाका बिरामीहरूमा कपालको वृद्धिको लागि प्रयोग गरिन्छ, डाक्टरहरूले सामान्यतया १ मिग्रि खुराक लिन्छन्, जबकि बीपीएच बिरामीहरूलाई प्राय: mg मिग्रा चाहिन्छ। Mg मिलीग्राम भन्दा ठूलो डोज सिफारिश गरिदैन।
यद्यपि Finasteride कपाल झर्ने उपचार गर्न सक्दछ, यसको प्रभाव कायम राख्न निरन्तर प्रयोग आवश्यक छ। Finasteride उपचार सुरू गर्ने एक बिरामीले परिणामहरू देख्छ, त्यसपछि रोकिन्छ, ती परिणामहरू रिभर्स हुनेछ। १ मिलीग्राम डोज हो दीर्घकालीन प्रयोगको लागि सुरक्षित , तर यसले विस्तारित साइड इफेक्ट पनि निम्त्याउन सक्छ।
यसको साइड इफेक्ट र चेतावनीहरूको बावजुद, Finasteride क्लीनिकल परीक्षण मा कुनै पनि अन्य औषधी संग महत्वपूर्ण अन्तरक्रिया देखाइएको छैन। अझै, प्रोपेसिया वा प्रोस्कारको साथ-साथै केहि सामान्य औषधिहरू लिने बारे सामान्य प्रश्नहरू छन्।
फिनेस्टरइडको विस्तारका बारे चिन्ता गर्ने बिरामीहरूलाई ईरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) र अन्य प्रजनन विकारहरू निम्त्याउनको लागि तिनीहरू वायाग्रा, सियालिस, वा अन्य ईडी ड्रग्ससँग एकसाथ लिन सक्दछन् कि भनेर सोच्न सक्दछन्। उत्तर हो हो। न केवल तिनीहरू सँगै प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर एक साथ प्रयोगले कम यौन समस्याहरूलाई कम गर्न वा रोक्न मद्दत गर्दछ।
तर के बारे मा अन्य कपाल वृद्धि उपचार को बारे मा रोगाइन ( minoxidil ) वा बायोटिन ? हो, यी दुबैका लागि सुरक्षित छन् Finasteride साथ एक साथ प्रयोग । तथापि, दिमागमा राख्नुहोस् कि Rogaine का आफ्नै साइड इफेक्टको सेट छ, जुन एक बिरामीले Finasteride साइड इफेक्टको साथ अनुभव गर्न सक्दछ।
टेस्टोस्टेरोन प्रतिस्थापन उपचार कम टेस्टोस्टेरोनको साथ बिरामीहरूमा फिनस्टेराइडको साथ प्रयोगको लागि पनि सुरक्षित छ।
के म फ्लू शट लिन्छु वा छैन?
र रक्सी के गर्ने? सामान्यतया, मदिरा र फिनास्टरिड सुरक्षित संयोजन हुन्। यद्यपि निश्चित अध्ययन देखाउनुहोस् कि दैनिक, धेरै रक्सी पिउँदा उच्च श्रेणीको प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिम बढाउन सक्छ, जस्तै फिनास्टराइडले। त्यसो भए, यो औषधि उच्च दैनिक मदिरा सेवनको साथ सैद्धान्तिक रूपमा जोखिमलाई मिल्दछ।
कसरी फिनस्टेराइड साइड इफेक्टबाट बच्ने
दुर्भाग्यवस, साइड इफेक्टहरू सँधै अपहेलना योग्य हुँदैनन्। कहिलेकाँही, तिनीहरू केवल हुन्छन्। अझै, केहि उपाय र सावधानीहरूले फिनमेस्टर साइड इफेक्टको जोखिम कम गर्न सक्दछ।
सबैभन्दा आधारभूत सावधानी भनेको स्वास्थ्य उपचार पेशेवरले तोकेको औषधि लिनु हो। बिरामीहरूले यसलाई खाना सहित वा बिना लिन सक्दछन्, तर प्रति दिन एक डोज मात्र लिन सक्दछ (दिनको कुनै पनि समय)। सामान्यतया, औषधिको प्रभाव तीन महीनाको लागि देख्न सकिदैन, त्यस पछि स्थिर लाभका लागि लगातार प्रयोग आवश्यक पर्दछ।
साथै, दिमागमा राख्नुहोस् कि केहि साइड इफेक्टहरू अस्थायी हुन सक्छन। साइड इफेक्ट कम हुन सक्छ तपाईं औषधि लिन जारी राख्नु भयो, र ती पूर्णतया कम हुन्छ तपाईले औषधि रोके पछि डा। र्यापोर्टले भने। त्यसोभए, बिरामी घटनाहरूको सामना गरिरहेका बिरामीहरूले औषधी रोक्दा उनीहरूलाई रोक्न सक्दछन्। यौन डिसफंक्शनका केही उदाहरणहरू छन् जुन अन्ततः टेपरिंग बन्द हुनुभन्दा पहिले लामो समयसम्म जारी रहन्छ।
तलको रेखा यो हो: के Finasteride का लाभहरू सम्भावित साइड इफेक्टहरू भन्दा बढि छ? तर उत्तर सरल छैन। यो प्रत्येक व्यक्तिको लागि फरक हुन्छ, तिनीहरूको अवस्था, मेडिकल ईतिहास, प्राथमिकताहरू, र अधिकमा निर्भर गर्दछ। प्रोपेसिया वा प्रोस्कार जस्ता औषधी लिने जोसुकाहरूको लागि राम्रो चाल भनेको डाक्टरको सल्लाह लिनु हो।
बिरामीहरूलाई डराउनु बिना कसरी साइड इफेक्टहरू वर्णन गर्ने
यो केटाकेटी इडिओपाथिक गठिया (JIA) को साथ बच्चा हुर्काउनु जस्तै हो
कती चाँडो तपाइँ योजना बी लिन सक्नुहुन्छ
Prilosec र nexium बीच के फरक छ?
तपाइँ अग्रिम copay तिर्नुपर्छ
के तपाइँ benadryl लक्षणहरु लाई एलर्जी हुन सक्नुहुन्छ?
के हुन्छ जब तपाइँ पहिलो पटक भायाग्रा लिनुहुन्छ